Kingdom – Gold Channel Movies
2Season2Mar. 13, 2020
Episode 1 Mar. 13, 2020
Episode2Mar. 13, 2020
Episode3Mar. 13, 2020
Episode4Mar. 13, 2020
Episode5Mar. 13, 2020
Episode6Mar. 13, 2020
Kingdom Season 1 ပြီးလို့ တစ်နှစ်ကျော် အကြာမှာတော့ Kingdom Season2ကို စောင့်နေသူတွေအတွက် သတင်းကောင်းပါ။
Kingdom ဇာတ်ကားက Zombie တွေ အကြောင်း ပါ။ Kim Eun Hee ရဲ့ ”The Kingdom of the Gods” ဆိုတဲ့ Webcomic ကို အခြေခံ ရိုက်ကူးထားတာပါ။
Kingdom Season 1 မှာ အိမ်ရှေ့စံ Lee Chang(Ju Ji Hoon) နဲ့ ပြည်သူတွေက Zombie တွေဟာ နေရောင်ကို ကြောက်သူတွေလို့ ထင် ထားပေးမဲ့ Season 1 အပိုင်6းမှာ မှ သူတို့အမှန်တကယ် ကြောက်တာ အပူချိန် ဆိုတာကို သိသွားပြီး Season 1 ထက် ပိုကြည့်ကောင်းမဲ့ ပုံပါ။
My Love from the Star ထဲ က မင်းသမီး Jun Ji Hyun လည်း Season2မှာ ပါဝင် လာအုံးမှာမလို့ ဘယ် အပိုင်းက ဘယ်အခန်းမှာ ပါမယ်ဆိုတာတော့ မကြေညာထားသေးပါဘူး။
Season 1မှာကတည်းက မြုပ်ကွက်တွေ အများကြီးနဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ Season 1 မှာ မိဖုရားခေါင်ကြီးရဲ့ ကိုယ်ဝန်အတု ပေါ်သွားသလို အိမ်ရှေ့စံရဲ့ သက်တော်စောင့် ရဲ့ မိန်းမကလည်း ကလေးမွေးတော့မှာဆိုတော့ ယောက်ျားလေးသာ မွေးရင် ပိုကြည့်ကောင်း ပိုရက်စက်ရူပ်ထွေးနိူင်မှာပါ။သက်တော်စောင့် Moo Young (Kim Sang Ho)ကလည်း သူ့မိန်းမကို အမဲသား ကျွေးချင်နေသူဆိုတော့ အဲ့အခန်း ဘယ်လိုလာမလဲ ဆိုတာကတော့။
Season 1 မှာ ဆေးဆရာမ Seo Bi (Bae Doo Na)က သက်ရှင်ပင် ကို တွေ့သွားပေမဲ့ အိမ်ရှေ့စံရဲ့ ဆရာကကော ဒီအသက်ရှင်အပင်အကြောင်းကို အစောကတည်းက သိနေတာလား ဆိုတာလည်း သိချင်စရာပါပဲ။
Season 1 မှာ ကျားပစ်အဖွဲ့က မင်းသား Yeong Shin(Kim Sung Kyu)ကကော သေနတ်ပစ်တာ လက်ဖြာင့်သလို ၊ ဘယ်လို အတိတ်ဇာတ်လမ်းတွေရှိနေလဲ ဆိုတာလည်း စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
နန်းတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ဘုရင်ကြီးကိုကော ဘယ်လိုတွေ ဆက်အသုံးချမလဲ။
မိဖုရားခေါင်ကြီးရဲ့ ခမည်းတော် အမတ် Cho Hak Ju (Ryu Seung Ryong) ကကော ဘယ်လိုတွေ ဆက် ယုတ်မာမလဲ ။
အရှေ့ အနောက် တိုင်းပြည်ရဲ့တံခါးတွေကို ပိတ်ဆို့လိုက်ပေမဲ့ ဟန်ယန်းပြည်မကြီးကကော Zombie တွေရဲ့ ရန်ကို ကာကွယ်နိူင်ပါ့မလား။
တပ်မ 5ခုကကော ခြေမူန်း နိူင်ပါ့မလား။
သက်ရှင်ပင် နဲ့ကော Zombie တွေကို ပျောက်ကင်းစေနိူင်ပါ့မလား။
အိမ်ရှေ့စံကကော ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ Zombie တွေရဲ့ ရန်ကနေ ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ပေးမလဲ။
Season2မှာလည်း အပိုင်6းပိုင်းထိပဲ ရှိမှာမလို့ Season2မှာပဲ အကုန်လုံးကို ဖြေရှင်းနိူင်မလား ဆိုတာကတော့ 13/March/2020 မှာ Netflix ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာပါ။ ဘာသာပြန်ကိုတော့ Gold Channel မှာလည်း စောင့်မျှော် ကြည့်ရူနိူင်ပါတယ်။
Original title 킹덤
TMDb Rating 8.3 84 votes
First air date Jan. 25, 2019
kaung khant soeMarch 14, 2020Reply
13 Reasons Why (2019) Season 3